जवानीमा हाई हाई, मर्ने बेलामा कोही न कोही ! चर्चित कलाकारको दुखद निधन ! – Life Nepali
जवानीमा हाई हाई, मर्ने बेलामा कोही न कोही ! चर्चित कलाकारको दुखद निधन ! काठमाडौ ! भारतका प्रख्यात गीतकार अभिलाषले लामो समयको अस्वस्थता पछि आइतबार मुम्बईमा संसार छाडे । उनी फोक्सोको क्यान्सरसँग जुधिरहेका थिए नै विगत १० महिनादेखि आर्थिक संकटमा पनि थिए । उनलाई दर्शक तथा श्रोताले ‘इतनी शक्ति हमें देना दाता’ गीतबाट चिन्छन् ।
अभिनेता तथा निर्देशक भगवान दादा फिल्म ‘अलबेला’को गीत ‘शोला जो भड्के’का लागि निकै लोकप्रिय भए । सन् १९१९ मा एक टेक्सटाइल मिल मजदुरको परिवारमा जन्मिएका भगवानलाई शुरुदेखि नै अभिनयको भोक थियो । उनले फिल्म ‘क्रिमिनल’बाट बलिउडमा पाइला चाले ।
कुनै समयमा बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनलगायका स्टारहरुसँग अभिनय गरिसकेका यी अभिनेताको करियर एकपटक झरेपछि कहिल्यै चढ्न सकेन । आर्थिक समस्याबाट मुक्ति पाउन उनले सानो भूमिकादेखि लिएर हरेक भूमिकामा अभिनय गरे । एकसमय उनको जुहुबीच अगाडि २५ कोठे बंगला थियो । उनीसँग सात गाडी थिए । तर आर्थिक संकट परेपछि उनले सबै बेचेर दुई कोठा लिएर बस्न थाले । उनको निधन सन् २००२ फेब्रुअरी ४ मा भयो ।
फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’मा सिमरन अर्थात काजोलको हजुरआमाको भूमिकामा अभिनय गर्ने अचला सचदेवको जन्म सन् १९२० मा पेशावारमा भएको थियो । सन् २०१२ मा उनको एक्लोपनका कारण अस्पतालमा निधन भयो । सन् २००२ मा उनका पति क्लिफर्ड डगलस पीटर्सको निधन भएको थियो । पतिको निधनपछि उनी पूणेमा पुना क्लबसँगै कोणार्क एस्टेट अपार्टमेन्टको दुई कोठे फ्ल्याटमा एक्लै बस्थिइन् ।
Previous यामाहा एक्सटीजेड १५० आयो नेपालमा , केही दिन भित्रै बिक्री सुरु हुने यती सस्तोमा (हेर्नुहोस मूल्यसहित)
Next आज बिहान ६ बजेदेखि कर्फ्यू आदेश जारी, हिडडुलमा समेत रोक